शीर्ष १० अब्राहम लिंकन २०२० को उद्धरण - उद्धरण प्याडिया
अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका को १ 16 औं राष्ट्रपति थिए। यसका अतिरिक्त उनी एक राजनीतिज्ञ र एक वकिल पनि थिए।
राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो कार्यकालमा उनले अमेरिकी गृहयुद्धको माध्यमबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्व गरे जुन कि राष्ट्रले अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक संकट हो।
साथै, उनले दासत्व समाप्त गरे र देशको अर्थव्यवस्था सुधार गरे। आफ्नो जीवनकालभर उसले सधैं प्रभावित र धेरैलाई उनका शब्दहरू र विचारहरूद्वारा प्रोत्साहित गरियो.
हामी केही हेरौं अब्राहम लिंकन उद्धरण। उसले भनेको छ, "तपाईको खुट्टा ठीक ठाउँमा राख्नुहोस्, त्यसपछि दृढ भएर खडा हुनुहोस्"। यसको मतलब यो हो कि उसले सबै व्यक्तिलाई के सही हो भनेर पत्ता लगाउन प्रोत्साहित गरिरहेको छ र कुनै पनि प्रतिबद्धता अघि उनीहरू के गरिरहेका छन् भन्ने बारे निश्चित हुन।
एकचोटि हामीले आफ्नो मन छनौट गरेर बनाइसकेका हुन्छौं, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफ्नो आधारमा उभिनु र हाम्रो उद्देश्यमा अडिनु पर्छ। यदि हामी हाम्रो स्थितिबाट मुक्त हुन्छौं भने हामी कहिल्यै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछैनौं र जीवनमा कुनै अर्थ खोज्नेछैनौं।
उनले यो पनि भनेका छन्, "म बिस्तारै हिंड्छु, तर म कहिले पछाडि हिंड्दिनँ")। यसका माध्यमबाट, उसले यो संकेत दिन चाहन्छ कि यो बिस्तारै जान ठीक छ तर यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हामी जीवनमा हिंड्दा हामी केही पनि गर्दैनौ जसले हामीलाई पछाडि फर्काउँछ।
हामीले हेर्नुपर्दछ कि यदि हाम्रो प्रयासहरू थोरै र बिस्तारै प्रगतिमा छन् भने पनि हामी एक त्यस्तो मार्ग अनुसरण गरिरहेका छौं जुन हामीलाई हाम्रो उद्देश्यको लागि नजिक ल्याउँदैछ।
अर्को पनि धेरै प्रेरणादायक अब्राहम लिंकन उद्धरण भन्छ, "भविष्यको भविष्यवाणी गर्ने उत्तम तरिका यसलाई सिर्जना गर्नु हो"। यसको मतलब यो हो कि तपाई आफैंको लागि भविष्य बनाउनको लागि प्रयास गर्नुहोस्। अरूलाई वा अन्य परिस्थितिहरूमा निर्भर नहुनुहोस् तपाईको भविष्यलाई तपाईले चाहानु भएको अनुसार आकार दिन। बरु तपाईंको तरिकाले काम गर्नुहोस् ताकि तपाईंको कार्यहरूले तपाईंको भविष्यलाई आकार दिन्छ।
यस्तो आश्चर्यजनक उद्धरणहरू सधैं संसार भर मा मानिसहरु लाई खोजेको छ प्रेरणाको लागि लिंकन.
सधै मनमा राख्नुहोस् कि सफल हुनको लागि तपाईंको आफ्नै संकल्प कुनै पनि चीज भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। - अब्राहम लिंकन
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ तपाईको रिजोलुसन हो। यो धेरै हुनु पर्छ ...
तपाईं आज यसलाई बेवास्ता गरेर भोलीको जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्नुहुन्न। - अब्राहम लिंकन
जान्नुहोस् कि जीवन मा, तपाईं हर पल भाग्न मा राख्न सक्दैन। यो बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ कि ...
भोलिको लागि केही नगर्नुहोस् जुन आज गर्न सकिन्छ। - अब्राहम लिंकन
तपाईंले भोलीको लागि केहि पेन्डिंग राख्नु हुँदैन। कसैले पनि भोलि के हुने देखेको छैन। यस प्रकार, ...
तपाईं जे भए पनि, राम्रो बन्नुहोस्। - अब्राहम लिंकन
तपाईं व्यक्तिलाई राम्रो बनाउन मोल्ड गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईं पक्कै पनि एक बन्न सक्नुहुन्छ! वरपर धेरै व्यक्तिहरूको साथ ...
अनुशासनले तपाईलाई के चाहानुहुन्छ र के तपाई अधिक चाहानुहुन्छ बीच छनौट गर्दैछ। - अब्राहम लिंकन
म जित्न बाध्य छैन, म सत्यको लागि बाध्य छु। म सफल हुन बाध्य छैन, तर म आफैंको उज्यालोमा बाँच्न बाध्य छु। - अब्राहम लिंकन
जीवन असफलताको धेरै केसहरूमा मिश्रित सफलताको कथाहरूको बन्डल हो। यो फेरि हराउन ठीक छ ...